एन्ड्रोइड, पीसी वा आईफोनमा इन्स्टाग्राम भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने ग्याजेट समाचार
भिडियो सामाजिक नेटवर्कमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने ढाँचाहरू मध्ये एक भएको छ। प्रत्येक चोटि हामी हेर्छौं कि उनीहरू कसरी हुन्छन् अधिक संभावनाहरू जब इन्स्टाग्राम जस्ता नेटवर्कहरूमा भिडियोहरू अपलोड गर्दा, जसमा नयाँ भिडियो मञ्च पनि छ। साथै फेसबुक वा ट्विटर जस्ता अन्य सामाजिक नेटवर्कहरूमा यसको अग्रणी भूमिका छ। जे होस् प्रयोगकर्ताहरूले सामना गर्ने समस्याहरू मध्ये एक सामाजिक नेटवर्कमा अपलोड गरिएका यी भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने तरीका हो।
हामीले भर्खरै तपाइँलाई कसरी देखाउने भनेर देखाएका थियौं ट्विटरबाट भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्। अब इन्स्टाग्रामसँग पनि त्यसो गर्ने पालो आयो। फोटोहरूको सामाजिक नेटवर्कले भिडियोहरूको लागि अधिक र अधिक ठाउँ छोड्दैछ, र त्यहाँ तपाईंलाई मनपर्‍यो र हुन सक्छ तपाईं आफ्नो कम्प्युटर वा फोनमा बचत गर्न चाहनुहुन्छ.
इन्स्टाग्रामले हामीलाई एक स्वदेशी उपकरण दिदैन जसले हामीलाई यी भिडियोहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ अन्य प्रयोगकर्ताहरू द्वारा पोष्ट गरिएको। त्यसैले हामी तेर्सो-पार्टी उपकरणहरूको सहारा लिन बाध्य हुन्छौं तिनीहरूलाई समात्नको लागि सक्षम हुन। भाग्यवस, यी उपकरणहरूको चयन समयको साथ नाटकीय रूपमा विस्तार भएको छ। त्यसैले यो सजिलो र सजिलो हुँदै गइरहेको छ।
यहाँ हामी व्याख्या गर्दछौं उपकरणमा निर्भर गर्दै हामी यी भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्दछौं। चाहे तपाईं आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा डेस्कटप संस्करणमा वा आईओएस उपकरणमा सामाजिक नेटवर्क प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यसैले, तपाईं कुनै पनि समस्या बिना कुनै पनि समयमा यी भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
1 एन्ड्रोइडमा इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
2 पीसीमा इंस्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
2.1 सिधा डाउनलोड गर्नुहोस्
3 आईफोनमा इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
एन्ड्रोइडमा इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
सामाजिक नेटवर्क मूल रूपमा मोबाइल फोनको लागि सिर्जना गरिएको थियो, यद्यपि यसको लामो समयको लागि यसको डेस्कटप संस्करण रहेको छ। तर प्रयोगकर्ताहरूको विशाल बहुमत यसको स्मार्टफोनबाट पहुँच गर्दछ। यदि तपाईंसँग एन्ड्रोइड फोन छ भने, हामी यी भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने धेरै तरिकाहरू फेला पार्दछौं। सबैभन्दा सजिलो तरीका भनेको अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नु हो। प्ले स्टोरमा हामीसँग धेरै संख्यामा अनुप्रयोगहरू छन् जुन हामीलाई यो सम्भावना दिन्छ।
यस सन्दर्भमा उत्तम विकल्प भनेको इन्स्टाग्रामको लागि भिडियो डाउनलोडर हो। यस अनुप्रयोगलाई धन्यवाद, जुन हामी यस लिंकमा सित्तैमा डाउनलोड गर्न सक्दछौं, हामी हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्छौं जुन अन्य प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक नेटवर्कमा अपलोड गर्छन्। र यसले काम गर्ने तरिका साँच्चिकै सरल छ, त्यसैले हामी यस सम्बन्धमा समस्याहरू हुनेछैनौं। एक पटक डाउनलोड भएपछि, हामी केवल इन्स्टाग्राममा प्रवेश गर्नुपर्नेछ।
त्यहाँ हामीले हामीले देखेका भिडियोहरू अवश्य भेट्टाउनु पर्छ जुन हामीलाई चासो लाग्छ। हामी त्यसपछि तीन ठाडो पोइन्टहरूमा क्लिक गर्दछौं जुन स्क्रिनको माथिल्लो दाहिने भागमा देखा पर्दछ। हामी कन्टेक्स्ट मेनूमा धेरै विकल्पहरू पाउनेछौं, जुन मध्ये हामी पनि हामीले युआरएलको प्रतिलिपि गर्ने सम्भाव्यता फेला पार्दछौं भने पोष्ट को। हामी यो विकल्पमा क्लिक गर्दछौं र URL क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि हुनेछ। त्यसो भए, हामी हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा डाउनलोड गरेको अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्दछौं।
यस अनुप्रयोग भित्र, हामीले के गर्नुपर्दछ हामीले भर्खरै प्रतिलिपि गरेको URL लाई टाँस्नु पर्छ। हामीले इन्स्टाग्राममा हेरेका र हामी डाउनलोड गर्न चाहेको भिडियो स्क्रिनमा प्रदर्शित हुनेछ। हामीले सेयर आइकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, जहाँ हामीसँग यसलाई डाउनलोड गर्ने सम्भावना हुन्छ। यस विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड सुरू हुनेछ। केही सेकेन्डमा हामीसँग हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा भिडियो हुनेछ।
पीसीमा इंस्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
एप्लिकेसनको डेस्कटप संस्करणको उपस्थिति प्राप्त भएको छ। वर्तमानमा हामी यसबाट धेरै संख्यामा कार्यहरू गर्न सक्दछौं, यसले हामीलाई ती खाताहरूको प्रोफाइलहरूको बीचमा नेभिगेट गर्न अनुमति दिन्छ जुन हामी एक धेरै सहज तरीकाले पछ्याउँदछौं। तसर्थ, यो सम्भव छ कि हामी अवसरको बीचमा एक भिडियोमा आउँदछौं। र यदि हामी ब्राउजरको रूपमा गुगल क्रोमको साथ कम्प्युटर प्रयोग गरिरहेका छौं, हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन्।
सिधा डाउनलोड गर्नुहोस्
त्यहाँ एक धेरै साधारण ट्रिक छ जसले हामीलाई पृष्ठहरूको आवश्यकता बिना नै भिडियोहरू डाउनलोड गर्न वा ब्राउजरमा विस्तार स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ। हामीले के गर्नु पर्छ इन्स्टाग्राम प्रोफाईल प्रविष्ट गर्नुहोस् जहाँ हामीलाई रुचि भएको भिडियो छ संयुक्त राज्य अमेरिका जब हामी प्रोफाइलमा हुन्छौं र हामीमा भिडियो अवस्थित छ, हामी यसमा दायाँ क्लिक गर्दछौं, पोष्ट प्रविष्ट नगरी। हामी त्यसपछि विकल्प "नयाँ ट्याबमा खुला लिंक" चयन गर्दछौं।
जब हामी नयाँ ट्याबमा खोल्छौं, भिडियोको ठेगाना यो केहि यस्तो छः https://www.instagram.com/p/Bpw1bBIl775/। केवल हामीले गर्न लागेका छौं यूआरएल थोरै परिमार्जन गरिएको छ। तपाईंले भर्खर इन्स्टाग्राम अघि क्यु क्यु थप गर्नुपर्दछ, र हामी यसलाई डाउनलोड गर्न सक्षम हुनेछौं। त्यसैले URL हुन्छ: https://www.qqinstagram.com/p/Bpw1bBIl775/। हामी त्यसोभए ठेगाना बारमा इन्टर गर्यौं।
यसले केहि समय लिन सक्दछ, तर यसले नेतृत्व लिन्छ पृष्ठ जहाँ हामी भिडियो सीधा डाउनलोड गर्न सक्छौं। एक डाउनलोड बटन स्क्रिनमा देखा पर्नेछ, जुन हामीले यस केसमा थिच्नु पर्छ। यस प्रकार, हामी एक सरल तरीकाले हाम्रो कम्प्युटरमा भिडियो डाउनलोड।
गुगल क्रोम विस्तार को एक विशाल संख्या उपलब्ध छ, धन्यबाद जुन हामी यी भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्दछौं जुन हामीले हाम्रो पीसीमा इन्स्टाग्राममा देख्यौं। यसैले, हामीले केवल यो एक्स्टेन्सन स्थापना गर्नुपर्नेछ र जब हामी भिडियो देख्छौं, हामीले केवल डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुपर्नेछ, जसले प्रक्रियालाई उल्लेखनीय तरिकामा सुविधा पुर्‍याउँछ।
त्यहाँ राम्रो विस्तार छ जुन हामीलाई सामाजिक नेटवर्कमा अपलोड गरिएको सबै प्रकारका सामग्री डाउनलोड गर्न अनुमति दिनेछ। प्रश्नको विस्तारलाई इन्स्टाग्रामको लागि डाउनलोडर भनिन्छ, जुन तपाईं यस लिंकमा क्रोममा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि धन्यबाद, तपाई दुबै फोटो र भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ जुन सामाजिक नेटवर्कमा अपलोड गरिएको छ। यसको अपरेशन पनि धेरै सरल छ, जब हामी यसलाई ब्राउजरमा स्थापना गर्दछौं, हामीले केवल सामाजिक नेटवर्कमा प्रवेश गर्नुपर्नेछ।
प्रोफाइल प्रविष्ट गर्दा, यदि हामी भिडियो वा फोटोमा कर्सर राख्छौं भने हामी के पाउँछौं देख्नेछौं यसको शीर्षमा डाउनलोड गर्न विकल्प। त्यसैले हामीले केवल यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, ताकि हामी भिडियो वा फोटो डाउनलोड गर्न सक्नेछौं जुन एक साधारण तरीकाले हाम्रो रुचि हो। तिनीहरू स्वचालित रूपमा कम्प्युटरमा डाउनलोड हुनेछन् र हामी अब बचत गर्न सक्दछौं वा तिनीहरूसँगै काम गर्न सक्दछौं। भिडियोहरूको मामलामा, तिनीहरू सँधै MP4 ढाँचामा डाउनलोड हुन्छन्।
आईफोनमा इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
आईफोन संग यो एन्ड्रोइड संग जस्तै छ, यस सन्दर्भमा सबै भन्दा राम्रो र सजिलो विकल्प अनुप्रयोग प्रयोग गर्नु हो। एप स्टोरमा हामी इन्स्टाग्रामबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्न धेरै विकल्पहरू फेला पार्दछौं, जसको अपरेशन समान छ। राम्रो विकल्प, जोसँग सकारात्मक उपयोगकर्ता रेटिंग्स छ, रेग्रामर हो, जुन तपाईं यो लिंकमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
जब हामी यसलाई आईफोनमा स्थापना गर्दछौं, गर्नुपर्दछ पहिले इन्स्टाग्राममा जानुहोस् र हामीलाई रुचि भएको भिडियो खोज्नुहोस् यो अवस्था मा। स्क्रिनको माथिल्लो दायाँ भागमा हामी तीन ठाडो पोइन्टहरू पाउँछौं, जसमा हामीले थिच्नु पर्छ। त्यसो गर्दा, धेरै विकल्पहरू देखा पर्नेछन्, जस मध्ये हामीमा भनिएका भिडियो को URL को प्रतिलिपि गर्ने एक फेला पार्छौं। हामी यसमा क्लिक गर्दछौं।
हामी त्यसपछि रेग्रामर प्रविष्ट गर्छौं र हामी देख्नेछौं कि स्क्रिनमा बक्स देखा पर्नेछ। हामीले के गर्नु पर्छ हामीले भर्खरै यसमा प्रतिलिपि गरेको यूआरएल टाँस्नु हो। हामी पछाडि पूर्वावलोकन बटनमा क्लिक गर्दछौं कि हामी डाउनलोड गर्न चाहेको भिडियो वास्तवमा के हो भनेर हेर्नका लागि। अर्को, सेयर बटन क्लिक गर्नुहोस् र हामी धेरै विकल्पहरू प्राप्त गर्नेछौं। हामीले सेभ हिट गर्नु पर्छ।
यस तरिका मा, भिडियो हाम्रो आईफोनमा बचत हुनेछ। त्यसैले लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्कबाट भिडियो डाउनलोड गर्ने प्रक्रिया आईफोनको लागि यस नि: शुल्क अनुप्रयोगको लागि धेरै सरल धन्यवाद हो।
के तपाईं इन्स्टाग्राममा अनुयायीहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ? यो गर्न सक्षम हुनको लागि उत्तम सुझावहरू पत्ता लगाउनुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » aPLICACIONES » इन्स्टाग्रामबाट भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने
IOS र macOS उपकरणहरूमा कसरी एयरड्रप प्रयोग गर्ने
नयाँ अमेजन इको प्लसको विश्लेषण, हाम्रो घरलाई उत्तम आवाजको साथ डोमटाइज गर्दै